Shina: Hetsi-panoherana Am-pilaminana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 4:37 GMT
(Marihina fa tamin'ny 3 Desambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Toa mitohy hatrany ny olana ho an'ny mponina ao amin'ny tanànakely ao Huacao any ambanivohitry ny distrikan'i Minxing ao Shanghai. Nampiseho ny tatitra avy amin'ny fampitam-baovao tao amin'ny tanibe roa taona mahery lasa izay [zh] fa rehefa niandry nandritra ny taona maro ireo mponina dia tsy mbola nahazo ny onitra tamin'ny fivarotana ny taniny izy ireo na dia teo aza ny fanambaran'ny mpitondra governemanta tao an-toerana.
Taorian'izany, navoaka tao amin'ny tranonkalam-baovao iray tao Shanghai [zh] tany am-piandohan'ity lohataona ity ny taratasy misokatra ho an'ireo mpitondra governemanta tao amin'ny tanànakelin'i Huacao izay nanambara ny ahiahin'ny mponina mikasika ny tetikasa fanitarana ny làlambe mankany amin'ny tanimbolin'izy ireo. Natao aloha ny taratasy fangatahana fanazavana bebe kokoa ho an'ny sampandraharaham-panjakana sy ny tompon'andraikitry ny governemanta izay tafiditra tao amin'ity tetikasa ity, ho fiarovana ny toeram-pambolena ao amin'ny tanànakely, sy ny fepetra momba ny fanonerana ny mponina.
Tamin'ny farany volana lasa teo, nitatitra ny gazety Sun Daily tao Hong Kong fa nanao dingana lehibe kokoa ireo mponina tao Huacao, azo jerena ao amin'ny fifanakalozan-kevitry ny tranokalam-baovao sy ny tranokalam-baovao amin'ny teny Shinoa any ampitan-dranomasina ny momba ilay tatitra, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mety jerena ao amin'ny tanibe, saingy azo jerena tsy mila proxy kosa ny bilaogy Spaces CNnews MSN [zh].
Raha jerena ao anatin'ny fikarohana Baidu sy ny Google ny andalana voalohany amin'ny tati-baovao dia tsy mbola niseho tao amin'ny fampahalalam-baovao tao Shina tanibe ny tantara – na io tamin'ny teny Anglisy – na dia efa naverina tao amin'ny bilaogy MSN Spaces CNnews aza ny ampahany tamin'izany:
Nanao Fanakanan-dàlana ho Hetsi-panoherana Ny Mponina An-Tananakely tao Shanghai
Nitatitra ny gazety Sun Daily tao Hong Kong fa nisy ny fanakanana tao anatin'ny andro vitsivitsy tao an-tanànakelin'i Huacao, akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Hongqiao ao Shanghai. Nanao fanafihana maromaro tao amin'ny biraon'ny komitin'ny tanànakely ireo mponina avy amin'ny tanànakely maro izay tsy afa-po tamin'ny fanonerana azy ireo avy amin'ny manampahefana, ary nanakana ireo làlana lehibe. Nosamborin'ny polisy ny mponina maro, fa ny omaly kosa anefa dia nanohy nanao hetsi-panoherana am-pilaminana tao amin'ny biraon'ny komitin'ny tanànakely ny mponina sasany.
Tsy nety namoaka sarin'ny fihetsiketsehana ny karoka sary anaran'ny tanànakely tamin'ny Baidu sy ny Google, toy izany ihany koa no nitranga tao amin'ny tranokalan'ny olom-pirenena mpanao gazety mpaka sary Molive.cn, YouTube ary ny folo tamin'ireo tranonkala Shinoa mitovy amin'izany tao amin'ny tanibe .